Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta oo digniin u diray Shirkadaha Isgaarsiinta ee dalka | Wardoon
Home Somali News Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta oo digniin u diray Shirkadaha Isgaarsiinta ee dalka
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta oo digniin u diray Shirkadaha Isgaarsiinta ee dalka
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolijiyada Soomaaliya ayaa faray maamulada Shirkadaha Isgaarsiinta ee dalka inay si deg deg ah isu soo diiwaan geliyaan, si loo siiyo Ruqsada ay dalkan uga shaqeyn lahaayeen.
Eng Cabdi Canshuur Xasan ayaa sheegay in bishan marka ay dhamaato ay u aqoonsan doonaan Shirkadihii aan isdiiwaangelin iney yihiin kuwo si sharci darro ah dalkan uga shaqeynayay, iyadoo lagu soo daabici doono Websiteyada Hay’ada Isgaarsiinta Qaranka, Midka Wasaarada Boostada, Kan Maaliyada iyo midka Midowga Isgaarsiinta Caalamiga (ITU).
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknoolijiyada Soomaaliya ayaa dhinaca kale sheegay iney la socon doonaan dhaqdhaqaaqyada tilifoonada ay dadka Isticmaalo, taasoo uu ku sheegay iney qeyb ka tahay qorshaha lagu xaqiijinayo amaanka.
” Sharciga Isgaarsiinta wuxuu dhigayaa in la sameeyo Simcar registration, in Sim kaarada dadka Isticmaalo la diiwanageliyo, si loo ogaada yaa ku hadlay, Qofkan muxuu yahay marka qofkii Nabad diid ah marka hore ma qaadan karo haduu qaatana cidii siisay ayaa ka masuul ah, Taleefoon kastana in la daba geli karo halka lagu isticmaalayna la ogaan karo” ayuu yiri Wasiir Canshuur.
Eng Cabdi Canshuur Xasan ayaa ugu danbeyn u sheegay Wasaaradaha ay hoos imanayaan arrimahan iney iyaguna kala shaqeeyaan sidii loola socon lahaa dhaq dhaqaaqa Shirkadaha Isgaarsiinta ee dalka ka jira iyo dadka ay siiyaan adeegyadooda ee dhinaca xun u adeegsada.
Previous articleJabhadda ONLF oo ka Jawaabtay War TVga DDS laga siidaayay +VIDEO
Next articleAbwaan Baarlerex oo galabta geeriyooday
Maxamuud (Dalab)oo lomagacabay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Ciidamada Qalabka sida
Akhriso Usa oo si cad u taageeray Ra’iisul Wasaare Rooble